Wafti uu hogaaminayo wasiirka kalluumaysiga ee Puntland oo gaaray Buuhoodle, dhaliilayna hoggaanka Puntland. – Radio Daljir
Wafti uu hogaaminayo wasiirka kalluumaysiga ee Puntland oo gaaray Buuhoodle, dhaliilayna hoggaanka Puntland.
Buuhoodle, Feb 08 – Eng. Maxamed Faarax Adam oo tafaasiil ka bixiyey ujeedada safarkiisa ayaa sheegay in ay u yimaadeen gobolka Cayn si ay ugu kuur-galaan colaada ka jirta gobolka, oo sida uu sheegay ay weerar gardaro ah ku soo qaadeen ciidamada Somaliland.
Wasiirku waxaa uu sheegay in dawlada Puntland ay diyaar u tahay in ay dalka iyo dadkaba difaacdo, ayna la socoto dagaallada ka socda gobolka Cayn.
Wasiirka ayaa sheegay in shacabka gobolka Cayn lagu soo weeraray madaafiic iyo hubka culus, waxaana uu sheegay in mas’uuliyadda dagaalka uu leeyahay M/weyne Siilaanyo oo uu sheegay in uu iclaamiyey dagaal.
Wasiirka ayaa ku dhaliilay hoggaanka Puntland ficil la’aan, iyo ka jawaabid la’aan dagaalka ay iclaamisay Somaliland.
Wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka Puntland in ay qaybta kaga aadan ka qaataan dagaalka, ayna u gargaaraan shacabka gobolka Cayn ee gardarada iyo daandaansiga lagu soo weeraray.
Waxaa hore u joogay magaalada Buuhoodle wafti uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Puntland oo dhawr maalmood ku sugnaa gobolka Cayn.